पहिलो चरणमा यी चर्चित नेताको हालत के होला ? – SamajKhabar.com
पहिलो चरणमा यी चर्चित नेताको हालत के होला ?
संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: २७ कार्तिक २०७४, सोमबार १५:२९
रमेश लम्साल काठमाडौं ।
नेपालको संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा लिइएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा केही रमाइला र रोचक प्रतिस्पर्धा हुने भएका छन् ।
नेकपा९माओवादी केन्द्र० परित्याग गर्नुभएका डा भट्टराई पछिल्लोपटक नेकपा९एमाले० र माओवादी केन्द्रसहितको वाम गठबन्धनमा सहभागी हुनुभएको थियो । गठबन्धनबाट गोरखा क्षेत्र नं २ मा टिकट नपाएपछि नेपाली काँग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्नुभएका भट्टराई र वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार श्रेष्ठ विगतमा एकै पार्टीका नेताका रुपमा हुनुहुन्थ्यो ।
एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डे प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्नुभएको छ । धादिङ क्षेत्र नं १ ९क० बाट उम्मेदवार बन्नुभएका पाण्डे २०४८ को प्रतिनिधिसभा र २०७० को दोस्रो संविधानसभाको सभासद्मा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
सोही क्षेत्रबाट विगतमा प्रतिस्पर्धी रहनुभएका पाण्डे र नेकपा९माओवादी केन्द्र०का नेता शालिकराम जमरकट्टल यसपटक प्रदेश सभामा उम्मेदवार हुनुहुन्छ । विसं २०६४ को संविधान सभामा निर्वाचित सभासद् जमरकट्टेल धादिङ क्षेत्र नं १ ९ख०बाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।
यस्तै विनाविभागीय मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पनि प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार हुनुहुन्छ । कालीकोटबाट दोस्रो संविधान सभामा निर्वाचित शाही यसपटक कालीकोट ९ख० बाट प्रदेश सभाको उम्मेदवार बन्नुभएको छ ।
पूर्वसूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राई भोजपुर ९ख०, पूर्वविद्यार्थी नेता राजेन्द्र राई भोजपुर ९क०, पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाही हुम्ला ९ख०, पूर्वसंस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लम्जुङ ९ख० बाट उम्मेदवार बन्नुभएको छ ।
पूर्वसभासद् नरेश भण्डारी जुम्ला ९ख०, २०५१ को प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद दीपकजंग शाह पनि यसपटक जाजरकोट ९ख० बाट उम्मेदवार बन्नुभएको छ ।
२७ कार्तिक २०७४, सोमबार १५:२९ मा प्रकाशित
गोइत समूहका ११ केन्द्रीय सदस्यले बुझाए हतियार